Grid maka cucumbers: esi edozi trellis iwu - Akwukwo nri - 2019
Uru na iwu nke ịwụnye ụgbụ trellis maka cucumbers
Kukumba, dị ka a maara, bụ alaka osisi na n'ogige chọrọ oghere dị oke maka ogwe osisi ha ogologo na akwukwo. Ọtụtụ ndị na-anọ n'oge okpomọkụ na-enye anụ ụlọ ha na-acha ndụ ndụ n'efu, ha na-etolite n'okporo ụzọ na ọbụna n'àkwà ndị agbata obi. Ma gịnị ka m ga-eme ma ọ bụrụ na saịtị ahụ dị ntakịrị, ma achọrọ m ịmalite na-eto eto na ya? Ebee ka inwe ohere zuru oke maka cucumbers iji too nkasi obi ma nwee obi ụtọ? N'ebe a, ị nwere ike ịbịaru usoro ntanetị, nke bụ, iji nsị trellis maka cucumbers. Kedu ihe dị otú a, gịnị ka o ji mee cucumbers, nke kachasị mma ịhọrọ na otu esi etinye ya - azịza nke ajụjụ ndị a, yana ihe atụ doro anya nke eji na foto ahụ, ị ​​ga-ahụ n'isiokwu anyị.
Kedu otu esi ahọrọ okporo maka cucumbers
Ntinye nke okporo ígwè trellis
Esi eji eriri cucumbers na trellis
Nkuzi na ntughari: uru nke usoro
Usoro a nwere ọtụtụ uru ndị dị mfe ịchọta ngwa ngwa mgbe echichi nke ngwaọrụ a.
Ihe mbụ ị na-ele anya bụ otú ọ ga-esi ọsọ ọsọ ma nwee obi ụtọ Ome ike ga-amalite ịrịgo mkpụrụ ndụ, na-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ ihe na-ekpo ọkụ ma na-egbuke egbuke, na-agbapụ ụkwụ na ụzọ dị n'etiti akwa. Nnukwu ego nchekwa bụ otu n'ime isi uru nke usoro a.
Mgbe mmiri mbụ ma ọ bụ mmiri ozuzo mbụ, ị ga-achọpụta ngwa ngwa ka osisi gị daa, nke dị mkpa na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa fungal, dịka ihe atụ dị ka powdery mildew. A sị ka e kwuwe, a maara na nke a na ndị ọzọ yiri nje dị ka ebe mmiri na-adịghị akpọnwụ ruo ogologo oge.
Ịbụ na limbo, gị osisi na ha Mkpụrụ ndị ahụ dị ọcha mgbe niilena, nke kachasị mkpa, ọbụna ripened. A sị ka e kwuwe, anyanwụ na-eme ka cucumbers nile na-egbukepụ kpam kpam, dị ka mgbe ha nọ na-ezo n'okpuru bushes na epupụta, dina n'ala.
Akuku gi agaghi enwe ike inabata, n'ihi na nkpuru ọ bụla dị anya, ya mere a ga-akụghasị n'oge.
N'ịbụ ndị dị anya site na ala, na ala akọrọ na ọkụ, gị cucumbers agaghị aghọ ndị slugs, nakwa nwamba - nnukwu ndị hụrụ akwụkwọ nri ndị a n'anya.
Ya onwe ya usoro ihe ubi ahụ ga-adịrị gị mfe karị ma na-atọ ụtọ. Na, dị ka omume na-egosi, ihe ọkụkụ ahụ na-aghọkwu ihe n'ọnọdụ dị otú ahụ nke uto, nke bụ ihe ọzọ dị mkpa.
Ị ma? Kukumba anaghị ama anyị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Gburugburu ụwa, e nwere ụdị dịgasị iche iche nke na-agba ihe oriri a na agba. The wildest bụ ụdị mammorica dị iche iche (cucumber-crocodile), nke mkpụrụ ya nwere ọgaranya odo-agba mmanụ agba ma yie ọnụ nke agụ iyi na-egbuke egbuke na-acha uhie uhie na-agbanye.
Ụdị ụgbụ maka kukumba, nakwa ụzọ isi wụnye ha, enwere ọtụtụ. Ha niile nwere uru ha, ma ka ha wee ghọta ihe niile, anyị ga-elekwasị anya na nke ọ bụla n'ime ha.
Mee onwe gị ka ị na-agbanye onwe gị n'usoro iwu mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ nke onwe-gi na parthenocarpic kukumba.
A na-ewere ụdị nke a dịka ihe kachasị arụ ọrụ, n'ihi na ọ gụnyere nkwado ọzọ, nke na-eme ka usoro ahụ dum dịrịgide ma sie ike. A pụrụ itinye nkwụnye ọkụ n'akụkụ ọ bụla, dabere na ọchịchọ na uto gị. O nwere ike ịbụ nkwado na-akwado ma ọ bụ tụgharịa, A-ekara na ọbụnyere nkwado arc.
Nhọrọ ndị a dị iche na nke ọ bụla ọzọ dị na ọdịdị anya na enweghị mmetụta na uto na mkpụrụ nke kukumba.
Nhọrọ plastik bụ ihe ọzọ dị mma na usoro trellis maka ikuku osisi cucumber. Nke a bụ usoro dịkarịsịrị, ọ kwesịkwara ịmara oke ọrụ mara mma nke plastik ugbo. Ihe a nwere ike dị elu, nke na-enye ohere ka usoro ahụ guzosie ike ibu dị arọ, yana akwa akwa nke na-eyi, nke ga-enye gị ohere iji otu ihe ahụ maka ihe karịrị otu afọ.
Ọ dị mkpa! Maka ojiji ndi oru ugbo mara ihe nwere ike ikwu na icho ihe di na cent centimita.
Atụmatụ siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya nke ga-arụrịrịrịrịrị gị ozi ruo ọtụtụ afọ, ga-enwekwa ike ịgosi ọnụ ọgụgụ kachasị mma nke cucumbers. Otú ọ dị, usoro a enwere ihe nkwụghachi: ọnụahịa dị elu nke ihe atụ jiri ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga na mmetụ nke ígwè ahụ. O di nwute, ka oge na-aga, n'ihi ụtụtụ na mmiri ozuzo, nkedo ígwè gị nwere ike nchara.
Ịkwado trellis maka aka nri gị abụghị nke siri ike. Ihe kachasị mkpa bụ ịhọrọ saịtị kwesịrị ekwesị ka usoro ahụ ghara igbochi onye ọ bụla (ihe dị ka mita na ọkara site na akwa ndị ọzọ), tinyekwara ihe ọ bụla dị mkpa.
Ọ dị mkpa! Ahịrị nke trellis ka mma ịwụnye n'ọnọdụ si n'ebe ọwụwa anyanwụ ruo n'ebe ọdịda anyanwụ. Nke a ga-eme ka ịbanye ìhè nke ìhè anyanwụ na-acha na osisi niile dị n'ubi a.
Maka owuwu nke usoro trellis ị ga - achọ:
Ngwa. Ndị a bụ ogidi abụọ 1.5-1.8 m elu na nsọtụ akwa. Ndị na-akwado ya nwere ike ịbụ ígwè, osisi ma ọ bụ mee nke plastik - nke a adịghị mkpa. Ihe kachasị mkpa bụ na ha nwere ntukwasi obi zuru ezu ma nwee ike ịrụ ọrụ ha kachasị mkpa - iji debe ihe niile dị na ọnọdụ ọ bụla (ifufe siri ike ma ọ bụ mmebi mberede).
Ụgbọ okporo ígwè siri ike maka nkedo n'elu oke ihe. O nwere ike ịbụ site na ihe ọ bụla nwere ike ịdabere na nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
Ọ dị mkpa ilekọta oghere maka kposara, site na enyemaka nke anyị na-edozi okporo ígwè n'elu ma jikọọ nkwado ahụ ọnụ. Ọ bụrụ na ụlọ ahụ dị mma, ọ nwere ike ịbụ okpukpu abụọ welded na oghere maka nkedo.
Net onwe ya (tapestry ma ọ bụ plastic).
Ejima ma ọ bụ ụdọ siri ike.
Mbụ, na-ejighị n'aka, na-agbagha n'ime ya (anyị na-egwu n'ime) abụọ na-akwado n'akụkụ ọnụ nke bed.
Grid, nke a na-esetịpụ n'elu ala, na-eji nwayọọ nwayọọ aga n'elu okporo ígwè, nke ga-adị n'elu ụlọ ahụ. (Usoro a ga-adị ka ákwà mgbanaka na ọka.)
Mgbe nke ahụ gasịrị, ụgbọ okporo ígwè nwere okporo ígwè na ya, anyị na-ejikọta kposara na n'akụkụ abụọ na nkwado. Ọ na-apụta na ụlọ U.
Na-esote, dozie okporo ala ahụ, ebe ọ na-agba gburugburu ya na-ejikọta ya na n'akụkụ ya abụọ na nkwado ya na ejima ma ọ bụ eriri. Jide n'aka na ntutu ahụ siri ike ma debe ya.
Ihe niile, ugbu a maka nkwado dị na cucumbers, nke aka aka gị, ị nwere ike ijikọ osisi n'onwe ha.
Ị ma? Ndị nna nna ha nyere ndị kọnburu aka nna nna ha - liana, nke a na-ahụkarị n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ ma nwee ike ịrịgo elu ruo mita 20. Zucini, melons na pumpkins na-atụle na ịbụ ndị ikwu nke cucumbers.
Iji mee nke a, ịnwere ike iji eri eri nylon ma ọ bụ twine. Ihe bụ isi na garter bụ na nodules ị na-agbasie ike na mkpoko osisi nke ndị na-eto eto adịghị emeri ya ma ghara igbochi ihe ọṅụṅụ si na mgbọrọgwụ gaa na Ome.
Mụta otú e si eto cucumber dị iche iche dị ka: "Obi ike", "Zozulya", "German", "Nezhinsky", "Onye osobo".
Ya mere, jiri nwayọọ, jiri nwayọọ na-ejikọta otu njedebe nke eriri ahụ n'okpuru isi ohia ahụ, anyị na-adọkpụ nke abụọ site na ụgbụ gaa n'ọdụ ụgbọ elu dị n'elu, na-echekwa ya na eriri siri ike. Hụ na osisi adịghị agbatị agbatị - eriri a ga-abụ ihe nduzi maka Ome na-eto eto, nke ga-eduga ha na okporo.
I nwekwara ike iji obere vidiyo pụrụ iche. Site n'enyemaka ha, ọ dị ogologo oge antennae na Ome pinyere naanị na okporo na elu nke ogologo osisi ahụ na-enye ohere. Mgbe ahụ, ọ ga-eme ụzọ nke aka ya, na-ejidesi mkpụrụ ndụ niile ike.
Ugbu a, ị maara otú e si echekwa ohere n'ime ogige ahụ, na-eji usoro nke cucumbers na-eto eto na okporo ahịhịa trellis, mara otú e si edozi okporo n'elu akwa, ma marakwa otú e si eji eriri cucumber nke ọma.
Iji usoro a, ị ga-enwe ike igosi na ọ dị mfe ma rụọ ọrụ.
Ihe nduku na-aga nke ọma "Kubanka" ụtọ: nkọwa nke ụdị dị iche iche, àgwà, foto
Ezigbo na anụ ọhịa: ebee ka orchids na-etolite n'okike ma olee otú e si ekekọta ha?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Uru na iwu nke ịwụnye ụgbụ trellis maka cucumbers